यो हो विश्वकै विषालु बिरुवा जसलाई छुनै बितिक्कै हुन्छ मृत्यु | Makalukhabar.com
यो हो विश्वकै विषालु बिरुवा जसलाई छुनै बितिक्कै हुन्छ मृत्यु
फागुन २ । संसारकै सबैभन्दा विषालु विरुवा अस्ट्रेलियामा पाइने गिम्पी गिम्पीलाई मानिन्छ । यो विरुवालाई ‘सुसाइड प्लान्ट’ भनेर पनि चिनिन्छ ।
यसको पातहरु हाम्रोतिर पाइने सिस्नोजस्तै मसिनो पोल्ने रौजस्ता काँडाहरुले भरिएका हुन्छन्, जसलाई हाम्रो छालाले छुँदा अत्यन्तै पोल्ने र भत्भताउने खालका हुन्छन् । यसले दिने पीडालाई त कतिपय पीडितले एसिडले पोलेको र विजुलीको झट्का लागेको जस्तो हुने भनी बताएका छन् ।
डेन्ड्रोक्नाइड (Dendrocnide) जिनसमा पर्ने यो विरुवालाई छुँदा पात वा डाँठका खोक्रो झुस हाम्रो छालामा घुस्छ । त्यो घुसेपछि हामीलाई अत्यन्तै पीडादायी डसेको अनुभूति हुन्छ । यो केही घण्टादेखि कैयनदिनसम्म रहिरहन सक्छ ।
यो कुरा चाहिँ त्यो विरुवाको झुस हाम्रो छालामा कति घुसेको छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ । कतिपय अवस्थामा त त्यो पीडा महिनौंसम्म पनि रहिरहन सक्छ । अझ त्यो भागलाई छोइँदा, पानी पर्दा वा तापक्रममा परिवर्तन आउँदा पनि अत्यन्तै दुख्ने र पोल्ने हुन्छ ।
त्यो झुस पसेको शरीरको भागमा ससाना राता डाबर तथा फोकाहरु देखापर्न सक्छ ।
यो विरुवाको असरलाई कम गर्नको लागि पानी घोलेर नरम बनाइएको हाइड्रोक्लोरिक एसिडले काम गर्ने गर्छ । त्यसबाहेक, छालामा भिजेका झुसहरुलाई प्लगर वा चिम्चीले निकाल्दा पनि केही राहत मिल्छ । चिम्टीले निकाल्न नसकिने झुसहरुलाई छालामा टेप टालेर तान्दा पनि निस्कन सक्छ । तर छालाभित्र पसेका झुसले चाहिँ लामो समय सम्म दुःख दिन सक्छ । एजेन्सी
ए डिभिजन लिग : जितसँगै हिमालयन शेर्पा लिगको १० औं स्थानमा
विपन्नको साहारा थापा परिवार, लकडाउनको समयमा खाद्यान्न वितरण
लकडाउनः रुखजस्तै बनेर घरबाट बाहिर निस्किएपछि...
चैत्र २१, काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) जोखिम न्युनिकरण गर्न विश्वका अधिकांश मुलुकले लकडाउन गरिरहेका बेला एक भिडियो भाइरल भएको छ ।भाइरल भएको उक्त भिडियोमा एक जना रुखका पातहरुबाट बनेको कपडा लगाएर बाहिर निस्किएका छन् ।टिकटकमा भेटिएको उक्त भिडियो ती व्यक्तिका छिमेकीले साम... जारी राख्नुहोस...
लकडाउनमा पनि विवाह, अनलाइनबाटै पण्डितले पढे मन्त्र !
चैत्र १६, नयाँ दिल्ली । विश्वभर यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी छ । नेपालसहित कयौँ देश लकडाउनमा छन् ।भारतमा पनि यतिबेला लकडाउन छ। यस्तो समयमा वैवाहिक समारोह, सभा, कार्यक्रम गर्न प्रतिबन्ध छ। घरबाहिर निस्कन समेत कसैलाई छुट छैन।यस्तो अवस्थामा विवाह कसरी हुन सक्ला ? किनभने सामान्यतया विवाहका... जारी राख्नुहोस...
'लकडाउन' उलंघन गर्नेलाई भाले बनाइएपछि...
चैत ११, काठमाडौं। अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रकोप विश्वभर तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ। प्राय सबैजसो देशहरुले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आफ्नो भएभरको शक्ति लगाएका छन्। तर यसको औषधि पत्ता लगाउन सकेका छैनन्, जसका कारण ज्यान गुमाउने र संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोनाको लक्षण देखिएका मानिसला... जारी राख्नुहोस...
कोरोना भाइरसले बढायाे सेक्स टोयको विक्रि
चैत्र १०, एजेन्सी । कोरोना भाइरसको कारण अहिले विश्वका धेरै देशमा संकटको अवस्था छ । मुलुकहरू लकडाउनमा पुगेका छन् र धेरै जनताहरू घरभित्रै बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानिसहरूले खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामानहरू अत्याधिक मात्रामा खरीद गरेर घरमा सञ्चय गरिरहेका छन् ।कोरोनाका कारण मानिसहरूले सामान... जारी राख्नुहोस...
जब एउटा बाल्टिनका लागि दुई देशबीच भीषण युद्ध भयो...
चैत्र ९ । विश्वको इतिहासमा एकसेएक हिंस्रक युद्धहरू भएका छन् । जसमा लाखौं मानिसहरूको ज्यान गएको छ । यीमध्ये अधिकांश युद्धहरूमा राजनीतिक कारण हुन्थ्यो ।तर आजभन्दा करिब ६ सय ९५ वर्षअघि एउटा यस्तो युद्ध भएको थियो जुन युद्धको कारकतत्व केवल एउटा बाल्टिन थियो । बाल्टिनका कारण भएको उक्त युद्धमा २ हजारभन्दा... जारी राख्नुहोस...
जागिर बिना नै यसरी कमाउछिन यी युवती घण्टाको १२ लाख
चैत्र ७ । एक युवतीले एक घण्टामै १२ लाख रुपैयाँ कमाउँछिन् भन्दा तपाईंलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर, बास्तविकता यस्तै छ । यो तथ्य नेपालको भने होइन, अस्ट्रेलियामा बस्ने चेल्सी नामकी युवतीको कहानी हो ।उनले निरन्तरको कडा परिश्रमका कारण स्मार्ट वर्क गर्दा सफल भइने कुरा साबित गरिदिएकी छन् । उनी कुनै जागिर खाँ... जारी राख्नुहोस...
लाससँग डिनर गर्ने अचम्मको सौख
चैत्र ६ । ‘डेथ बडी’ देख्दा तर्सनु र डराउनु सामन्य हो । तर, त्यसैसँग खाना खानुपर्‍यो भने ? यो प्रसंग हो, बेलायतको । त्यहाँको एनाटोमी ल्याबमा लाससँग डिनर गराइन्छ । यद्यपी उक्त डिनर गर्नेको मुटु भने दह्रै हुनुपर्छ ।एनाटोमी ल्याब लाइभमा कार्यरत स्याम पीरीले मानिसलाई भिन्न अनुभूति दिलाउनका लागि यस्तो डिन... जारी राख्नुहोस...
एउटा यस्तो समुदाय जहाँ बाबुले नै गर्छन् छोरीसँग बिवाह
चैत्र ५ । हामीकहाँ बाबुछोरीको नाता सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ । तर बंगलादेशमा एउटा यस्तो आदिवासी समुदाय छ जहाँ बाबुले आफ्नै छोरीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाउँछन् अनि बाबुछोरीको सहवासमा आमाको पनि सहमती र स्विकृति रहन्छ ।हामीकहाँ ठूलो पाप मानिने यस्तो परम्परा बंगलादेशको मन्डी नामक आदिवासी जनजाति समुदायमा... जारी राख्नुहोस...
अत्यधिक लामो कपाल भएकी यी महिलालाई एकचाेटी नुहाउनै ६ बोतल स्याम्पु लाग्ने
फाेटाेः गुगलचैत्र ४ । महिलाको कपाललाई सुन्दरताको प्रतिक मानिन्छ । एक महिलाको कपाल अत्यधिक लामो भएकाले विश्वकिर्तिमान राख्न सफल भएकी छिन् । अमेरिकाकी आशा मन्डेलाको कपाल ५५ फिट लामो र तौल २० ग्राम रहेको छ ।यो कपाल धुनको लागी ६ बोतल स्याम्पु खर्च हुन्छ । कपाल सुक्नलाई पूरा एकदिन लाग्ने गरेको जनाइएको छ... जारी राख्नुहोस...
यो हो संसारकाे सबैभन्दा डरलाग्दो बिरालो
चैत्र ३ । के तपाईंलाई बिरालो देख्दा डर लाग्दछ रु सायद डर लाग्दैन होला । तर यदि तपाई‌ंले यो बिरालोको तस्वीर मात्र पनि देख्नुभयो भने अवश्य डराउनु हुनेछ । नडराउने पनि कसरी ? आखिर यो विश्वकै सबैभन्दा डरलाग्दो बिरालो न पर्‍यो ।उक्त बिरालोको नाम Xherdan हो । स्विजरल्याण्डको रुटी भन्ने ठाउँमा रहेको यो बिरा... जारी राख्नुहोस...
चितवनमा रगतको अभाव, घरघरबाट उठाइँदै रक्तदाता
‘जेले तिमीलाई मार्दैन, त्यसले तिमीलाई झन् बलियो बनाउँछ’
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ पुग्योः स्वास्थ्यमन्त्रालय
फ्रान्सका छ सय सेनामा कोरोना संक्रमण
अर्बौं खर्च गरेर पनि हजारौँ मर्ने कि भोकै बसेर बाँच्ने ?
कोरोना आशंकामा कपिलवस्तुका एक जना आइसोलेसनमा भर्ना
नेपालभित्रै कोरोना सरेको पहिलो घटना